မတျ 13, 2019 – Healthy Life Journal
ဒေါက်တာအုန်းကျော် (စိတ်ကျန်းမာရေးအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး – အငြိမ်းစား) စိတ်ကျန်းမာရေးဆေးပညာဌာနမှာ တွဲဖက်ထားတဲ့ ဆေးကျောင်းတစ်စုနဲ့ အမေးအဖြေ ဆွေးနွေးနေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ “ဒီနေ့ ဆရာသင်ကြားမယ့် သင်ခန်းစာကတော့ အရက်ကြောင့်ဖြစ်ပွားတဲ့ စိတ်ဝေဒနာတွေအကြောင်းပဲ။ ပထမဆုံး ခင်ဗျားတို့ သိသင့်တာက အရက်သောက်တတ်သူနဲ့ အရက်စွဲရောဂါရှိသူဘယ်လို ခွဲခြားနားလည်နိုင်သလဲဆိုတဲ့...
မကြာခဏလေအောင့်လေနာဝေဒနာ ဖြစ်တတ်ပါတယ် …
မေး. မကြာခဏ လေအောင့်လေနာဝေဒနာ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ဘယ်လို အစားအသောက်တွေကို ဆင်ခြင်သင့်ပါသလဲ။ ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာ အထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)မှ ဖြေကြားပေးပါသည်။ ဖြေ. မကြာခဏ လေအောင့်လေနာဝေဒနာဖြစ်ရင် အဓိက ရှောင်ရမှာကတော့ ကဖင်းပါတဲ့ အစားအသောက်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ကော်ဖီ၊ လက်ဖက်ရည်၊...
လိင်မှုဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေး ပညာပေးခြင်း [sex education]
ဒေါက်တာကျော်စွာဦး (တာဝန်ခံဆရာဝန်၊ ရောင်ခြည်သစ်ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း) မေး ။ ကလေးတွေကို မွေးပြီးပြီးချင်း စွန့်ပစ်တာတွေက များနေပါတယ်။ ဒီဖြစ်ရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး လူငယ် လူရွယ်တွေကို မျိုးဆက်ပွားကျန်းမာရေး အသိပညာပေးဖို့ ဘယ်လောက်အထိ လိုအပ်တယ်လို့ ဆရာ့ အနေနဲ့ ထင်မြင်ယူဆပါသလဲ။ ဖြေ ။ လူငယ်လူရွယ်တွေကြားထဲမှာ...
၊ ဇွန်ခိုင်ဦး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) လေ့လာမှုတွေအရ ဒီနေ့ခေတ် ဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့ သစ်သီးဝလံအများစုကို ပိုးသတ်ဆေး၊ ဓာတုပစ္စည်းတွေသုံးပြီး စိုက်ပျိုးထားတယ်လို့ သိရပါတယ်။ သဘာဝမဟုတ်တဲ့အတွက် ဒီနေ့ခေတ်မှာ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့ သစ်သီးဝလံစားရတာတောင် မလွယ်ပါဘူးဆိုပြီး ညည်းညူတတ်ကြပါတယ်။ ဗီတာမင်နဲ့ သတ္တုဓာတ်ပါဝင်ပြီး ကျန်းမာရေးကောင်းစေတဲ့ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့...
ကလေးအမြင်အာရုံအတွက် စိတ်ပူနေလျှင် အိမ်ပြင်ထွက်ပြီး ကစားခုန်စားလှုပ်ရှားခိုင်းပါ
၊ ကိုထက် ၊ ကလေးအမြင်အာရုံကောင်းမွန်စေဖို့ အိမ်ပြင်ထွက်ပြီး နေရောင်ခြည်အောက်မှာ ကစားခုန်စားပြုလုပ်တာကို တစ်နေ့ အချိန် နှစ်နာရီခန့် ပေးသင့်တယ်လို့ ကျွမ်းကျင်သူတွေက မိဘတွေကို သတိပေးလိုက်ပါတယ်။ ဒီနေ့ခေတ်မှာ ကလေးတွေကစမတ်ဖုန်း ဒါမှမဟုတ် တက်ဘလက်နဲ့ ဂိမ်းကစားတာ၊ တီဗီကြည့်တာစတာတွေနဲ့ အချိန်ကုန်နေကြတဲ့အတွက် အမြင်အာရုံဆိုင်ရာပြဿနာအမျိုးမျိုး...
နာမကျန်းဖြစ်နေလျှင် အိပ်စက်မှုကိုဆေးဝါးကဲ့သို့ အသုံးပြုသင့်
၊ ကိုထက် ၊ နေမကောင်းဖြစ်နေတဲ့အခါ ပထမဆုံး လုပ်သင့်တဲ့အချက်က အိပ်ရေး၀၀ အိပ်စက်အနားယူဖို့ပဲဖြစ်တယ်လို့ လေ့လာမှုအရ သိရပါတယ်။နေမကောင်းဖြစ်နေချိန်မှာ တာရှည် အိပ်စက် အနားယူတာက ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ကို ကောင်းမွန်စေပြီး ကူးစက်ပိုးတွေကို ကောင်းစွာတွန်းလှန်စေနိုင်တယ်လို့ လေ့လာသူတွေက ဆိုပါတယ်။ ပင်ဆဲလ်နေးဗီးယားတက္ကသိုလ် လေ့လာသူတွေက တိရစ္ဆာန်တွေကိုလေ့လာခဲ့ရာ...
♦ အယ်ဒီတာ ယခုရက်ပိုင်းအတွင်း ကျွန်မတို့ Healthy Life Page သို့ ဗီတာမင်စီပါဝင်သော Enervon-C ဆေးအကြောင်း စာဖတ်သူတို့ သိလိုသည့် မေးခွန်းများ ရောက်ရှိလာခဲ့ပါသည်။ သို့ဖြစ်ရာ စာဖတ်သူတို့ သိလိုသည်တို့ကို တိကျစွာ ဖြေကြားပေးနိူုင်ရန်အတွက် Enervon-C Brand...